စက္ကူလက်မှုပညာ - လက်မှုအနုပညာ | လက်မှုပညာစာမျက်နှာ (စာမျက်နှာ ၂)
ကလေးများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစက္ကူလက်ကိုင် ၇ ခု
အားလုံးမင်္ဂလာပါ! ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားတွယ်ကပ်စက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ရန်လက်မှုပညာအမျိုးမျိုးကိုသင်ယူဆောင်လာသည်။ သူတို့အားလုံးဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ ...
စတင်ရန်လွယ်ကူသော origami ၉ မျိုး
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာစတင်နိုင်ရန်ရိုးရှင်းသော origami ပုံ ၉ လုံးကိုသင်ယူလာပါပြီ။ ဒါဟာနည်းလမ်းတစ်ခု ...
ကွာပေးရမွေးနေ့ကိတ်မုန့် Box ကို
Easy Cardstock Ladybug
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ယနေ့ခေတ်လက်မှုပညာတွင်နွေ ဦး ကိုကိုယ်စားပြုသောလက်မှုပညာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။ ဒီကိစ္စမှာ ...
Origami တိရိစ္ဆာန်မျက်နှာများ, ကိန်းဂဏန်းများအောင်စတင်ရန်ပြီးပြည့်စုံသော
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာရိုးရှင်းတဲ့ origami ပုံတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြပေးပါမယ်။ On …
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ကျွန်ုပ်တို့သည်မိသားစုနှင့်အတူနေ့လည်ခင်းတွင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားနိုင်သည့်လွယ်ကူသောအော်ရီဂျီရီယယ်ဆက်များဖြင့်ဆက်လက် ...
လွယ်ကူသော origami ပင်ဂွင်း
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာငါတို့ဟာလွယ်လွယ်ကူကူနောက်ထပ်အော်ရီဂရီဂျီကိုလုပ်ကြမယ်။ ယခုတကြိမ်သွားသည် ...
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ယနေ့ခေတ်လက်မှုပညာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လွယ်ကူသော origami ပုံရိပ်များကို ဆက်၍ လေ့လာသွားပါမည်။ On …
လွယ်ကူသော Origami Koala မျက်နှာ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ခေတ်လက်မှုပညာမှာငါတို့ဟာနောက်ထပ် origami ပုံကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ငါတို့ဖျော်ဖြေမှာပါ ...
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီယာဉ်အသစ်အတွက်၊ စီးရီးထဲကနေလွယ်လွယ်ကူကူအော်ရီဂရီပုံတွေကိုနောက်ထပ်လုပ်ပါမယ်။
လွယ်ကူသော Origami ဝေလငါး
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ခေတ်လက်မှုပညာမှာဒီလှပတဲ့လိပ်ပြာကိုကတ်ထူပြားနဲ့တွယ်ကပ်စက္ကူတွေနဲ့လုပ်ထားတော့မယ်။ ဒါဟာ ...
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ယနေ့ခေတ်လက်မှုပညာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် origami လက်မှုပညာများကိုဆက်လုပ်သွားမည်။ ငါတို့သွားမယ်
လွယ်ကူသော Origami ခွေးမျက်နှာ
ဤဆောင်း ဦး ရာသီသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောယာဉ်ဖြစ်သည်။ အိမ်၏အသေးငယ်ဆုံးတောင်မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ကွာပေးရအံ့သြစရာများနှင့်အတူ Box ကို
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာကျွန်တော်တို့ဟာ Lilo ပန်း (သို့) ပန်းတစ်ပွင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကြည့်ကြမယ်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ယာဉ်မှာကစားဖို့လျှို့ဝှက်စာတစ်စောင်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင် ...
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ယနေ့ခေတ်တွင်ရိုးရှင်းသောကတ်ထူပြားတစ်မျိုးကို ...
ကတ်ထူပြားသို့မဟုတ်အိမ်သာစက္ကူလိပ်နှင့်ပြုလုပ်ရန်တိရိစ္ဆာန် ၆ ကောင်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ငါတို့ကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်းကတ်ထူပြားသို့မဟုတ်အိမ်သာစက္ကူလိပ်ပါသောတိရစ္ဆာန် ၆ ကောင်ကိုသင်ဤယူဆောင်လာသည်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ယနေ့ခေတ်တွင်တရုတ်စက္ကူဖြင့်အလှဆင်ထားသောဘောလုံးတစ်ခုလုပ်မည်။ အလှဆင်ရန် ...
ဤသေတ္တာများသည်လှပပြီးသေးငယ်။ မူရင်းဖြစ်သည်။ ငါရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုအသီးပုံသေတ္တာများလုပ်ကြပါပြီ ...
ကတ်ထူပြား minion #yomequedoencasa နှင့်အတူလုပ်ရန်ပြီးပြည့်စုံသော
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ခေတ်ယာဉ်မှာကတ်ထူပြားနဲ့အတူ minion လုပ်တော့မယ်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာငါတို့ကဒီပျော်စရာအိတ်ကိုလက်ဆောင်တွေကိုခြုံဖို့လုပ်တော့မယ်။ ဒါဟာအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော ...
Holy Week of Brother #yomequedoencasa
ညီနောင်များ bookmarks #yomequedoencasa
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လှပသောညီနောင်များကိုဒီအမှတ်အသားလုပ်တော့မယ်။ ကျနော်တို့အီစတာမှာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ရှိနေသော်လည်း ...
3D နှလုံးသားများသည်ကလေးများနှင့်ပြုလုပ်ရန်နှင့် #yomequedoencasa ကိုပြတင်းပေါက်ပေါ်တွင်တင်ရန်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ယနေ့ခေတ်လက်မှုပညာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် 3D ပြည့်စုံသောနှလုံးသားများကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရန်သင်ပြရမည်ကိုပြသပါမည်။
ဖခင်များနေ့နီးကပ်လာပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းသောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောလက်မှုပညာကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်မျှဝေချင်ပါသည်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ခမည်းတော်နေ့ရောက်လာလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ထိုယာဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သွားနေကြသည်။
Post-၎င်း၏နှင့်အတူဤစိတ်နှလုံးအထူးတစ်စုံတစ် ဦး ကိုအံ့အားသင့်ဖို့စံပြဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရွေးချယ်လိုသူသည်ဤလှပသောအသေးစိတ်ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
ကလေးများနှင့်ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသောစက္ကူပန်းချီကားသည်ကတ်ကြေးများနှင့်ကောင်းမွန်သောမော်တာကျွမ်းကျင်မှုများကို အသုံးပြု၍ ကလေးငယ်များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကို virtual ကြယ်ပွင့်နှင့်အတူ Origami
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! မျက်မှောက်ခေတ်တွင်ပြုလုပ်သောသတင်းများအရကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းများပေးရန်၊ ဂုဏ်ပြုရန်အတွက်သတင်းစကားတစ်ခုနှင့်မျက်နှာတစ်ခုပြုလုပ်မည်။
Valentine's Day အတွက်ရောင်စုံစာရွက်များနှင့်ကဒ်ပြားပါရှိသည်
Valentine's Day တွင်အရောင်အသွေးစုံလင်သည့်ဤစာရွက်ကတ်ပြားသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးလက်ခံရရှိသူသည်အလွန်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
ဒီစက္ကူပန်းပွင့်သည်တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့၎င်းသည်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောယာဉ်ဖြစ်သည်။
စာအုပ်ချစ်သူများအတွက်ဤပျော်စရာယာဉ်ကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်; ပျော်စရာနှင့်ဖန်တီးမှု bookmark ။
ပါတီများအတွက် Santa Claus ဦး ထုပ်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ယနေ့လက်မှုပညာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စုံလင်သော Santa Santa ဦး ထုပ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်သွားမည်။
Santa ဦး ထုပ် bookmark
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ရဲ့ယာဉ်မှာ Santa Claus ဦး ထုပ်ကိုလုပ်မယ်။ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်
အိမ်သာစက္ကူလိပ်အတွက် Origami 2
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ယနေ့ခေတ်ယာဉ်တွင်အိမ်သာစက္ကူလိပ်ကိုအံ့အားသင့်စေသည့်အရာအား origami ပြုလုပ်မည်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဟယ်လိုဝင်းအကြောင်းပြချက်ပိုမိုနီးကပ်စွာလာသည်, ဒီယာဉ်၌ငါတို့သည်သင်တစ် ဦး လင်းနို့ကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသင်တို့ကိုဆောင်ကြဉ်း ...
ဟယ်လို! ဒီယာဉ်မှာမိုဘိုင်းနှုတ်ခွန်းဆက်ကဒ်တစ်ခုလုပ်မယ်။ ၎င်းသည် element တစ်ခုဖြင့်မူလကဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စက္ကူဖြင့်ရောင်စုံကြောင်တစ်ကောင်ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသောဤလက်မှုပညာကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်၊ သင်၏အိမ်ကိုအလှဆင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကလေးတွေကဒါကိုကြိုက်မှာပါ။
စက္ကူလိပ်ပြာနှင့်စာသားလိပ်ပြာများကို scrapbooking ပြုလုပ်ရန်မူလနည်းလမ်း။ သူတို့ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်တွင်အလှဆင်ပုံစံအဖြစ်ထားမည်။
Tooth Fairy သည်ကလေး၏သွားများကိုညအချိန်တွင်စောင့်ရှောက်ရန်
ဤသွားသည် Fairy ယာဉ်သည်ကလေးများညအချိန်တွင်သူတို့၏သွားများကိုဖုံးအုပ်ရန်သို့မဟုတ်ဖုံးကွယ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးမောက်သည်၎င်းကိုအကြွေစေ့တစ်ခုသို့လဲလှယ်ပေးသည်။
ဒီယာဉ်မှာမင်းတို့လိုချင်တဲ့သူကိုပေးမယ့်မူရင်းနှုတ်ခွန်းဆက်ကဒ်ကိုလုပ်မယ်။ သင်ဘယ်လိုကြည့်ချင်ပါသလဲ ...
ပြေးပေါ် bug တွေ။ ကလေးများအတွက်ကစားနည်းတစ်ခုလုပ်သည်
ချစ်စရာ dandelions ကဒ်
ဒီရိုးရှင်းတဲ့ချစ်စရာ dandelion ကဒ်ကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။ ၎င်းသည်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးအထူးလူတစ် ဦး အားပေးကမ်းရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
နာနတ်သီးပန်းကုံးများသည်ပါတီပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ဂိမ်းအခန်းတစ်ခန်းကိုအလှဆင်ရန်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည် ... နွေရာသီရောက်လာသောအခါ ပို၍ ဖြစ်သည်။
pumped petaling နှင့်အတူ crepe စက္ကူပန်းပွင့်လုပ်နည်း
အလှဆင်ခြင်းနှင့်လက်ဆောင်များအတွက်အကောင်းဆုံးသော pumped petals များပါ ၀ င်သောစက္ကူဖြင့်မူလပန်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ လုပ်ရန်ရိုးရှင်းသောနှင့်အမြန်ယာဉ်။
မွေးနေ့တစ်ခု၊ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိလား၊ ပိုက်ဆံပေးချင်လား၊ ဒီလက်မှုပညာမှာငါတို့ပေးတဲ့မူလလမ်းကိုမင်းတို့တွေ့မှာပါ။ မင်းမှာမွေးနေ့လား၊ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရှိလား၊ ပိုက်ဆံပေးချင်လား၊ ဒါကိုလုပ်ဖို့မူရင်းနည်းလမ်းကိုကြည့်ရအောင်။
လွယ်ကူသော crepe စက္ကူကြာပွင့်
အိမ်ကိုအလှဆင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောခေါက်ဆွဲစက္ကူဖြင့်ကြာပန်းပန်းပွင့်ပြုလုပ်မည်။ တစ် ဦး တည်းအနေဖြင့်ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။
ချစ်သူများနေ့အတွက်လက်မှုပညာ။ Shaker ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်
ချစ်သူများနှင့်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုနေ့တို့ကိုကျင်းပရန်အနည်းငယ်သာကျန်တော့သည်။ ဤအပုဒ်တွင် Valentine's Day အတွက်ထို Shaker Card ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာရန်ဤ Shaker Card ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်ပေးမည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ချစ်ကြည်ရေး၏နေ့ကိုကျင်းပရန်အထူးတစ်စုံတစ် ဦး ကပေးရသည်။
ဒီနေ့ငါတစ်ခုခုကိုအဆိုပြုလာတယ်။ မင်းရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ကိုစက္ကူအပိုင်းအစများဖြင့်အလှဆင်ပါ။ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။
ဒီနေ့အခြားအလုပ်များမှအပိုင်းအစများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်သည်။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်ခြစ်လျှင်သင်ရပါလိမ့်မယ် ...
မွေးနေ့များသည်ဤကဲ့သို့သောဖိတ်ကြားချက်များသို့မဟုတ်ကတ်ပြားများကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်ကလေးများအတွက်ပွဲနေ့များဖြစ်သည်။ သင့်တွင်မွေးနေ့ရှိသောမိတ်ဆွေတစ် ဦး သို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တစ် ဦး ရှိပါကဤကတ်ပြားကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါသို့မဟုတ်ကလေးမွေးဖွားရန်ဖိတ်ကြားပါ။ ၎င်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သောအရာနှင့်အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။
ဒီပို့စ်မှာဒီဖိတ်ကြားချက်ကိုပုလင်းတစ်လုံးရဲ့ပုံသဏ္inာန်နဲ့အညီလှပအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကလေးရေပန်း၊ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပွဲကျင်းပခြင်းနှင့်ပေးဝေခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးမယ် သင့်ရဲ့ guests ည့်သည်များအံ့သြဖို့စူပါမူရင်းပုလင်း။
ဒီသင်ခန်းစာမှာကလေးတွေနဲ့အတူအောင်အောင်မြင်မြင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့စက္ကူဆုတံဆိပ်တွေဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာသင်ပေးတယ်။ အမေများနေ့ရောက်ပြီဆိုတော့တစ်ယောက်ချင်းစီကိုသင့်မိခင်ကိုပေးဖို့သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ပါပြီ။ သူတို့က ၄ င်းကိုနာမည်တစ်ခု (သို့) စကားစုတခုပေးပြီးသူတို့လိုချင်တဲ့အရောင်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်။
စိတ်ကြိုက်ရောနှောမီဒီယာ tag ကိုလုပ်နည်း
လက်ဆောင်ကဒ်၊ ဘုတ်မှတ်များစသည်တို့ကိုအသုံးပြုရန်စိတ်ကြိုက်ရောနှောထားသောမီဒီယာ tag တစ်ခုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုယနေ့ပို့စ်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။
အချို့သောလိပ်ပြာများကိုသေစေရန် - ကျန်စာရွက်ကို အသုံးပြု၍ Bookmark သို့မဟုတ် bookmark ။
ကျနော်တို့ဒီအမှု၌ကျန်သေ - ဖြတ်တောက်ခြင်းစက္ကူအချို့လိပ်ပြာကိုအသုံးပြုပြီး Bookmark လုပ်သွားကြသည်; သို့သော်သင်သည်အခြားမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုဖန်တီးနိုင်သည်
သင်၏ကိုယ်ပိုင်မှတ်စုစာအုပ်များကိုဖန်တီးရန်နှင့်ဒိုင်ယာရီများ၊ စာအုပ်များ၊ အယ်လ်ဘမ်များအတွက်ဂျပန်စာချုပ်ချုပ်ရန်မည်သို့လေ့လာရမည်ကိုလေ့လာပါမည်။
နှစ်ခြင်းခံရန် (သို့) ကလေးရေချိုးရန်အတွက်ဤပြီးပြည့်စုံသောဖိတ်ကြားချက်ကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်သင်၏အခမ်းအနားသို့ the ည့်သည်များအားမည်ကဲ့သို့ပေးကမ်းရမည်ကိုလေ့လာပါ၊
နွေ ဦး ရာသီအတွက်နံရံများနှင့်တံခါးများပေါ်တွင်ပန်းပွင့်တစ်လွမ်းသူ့ပန်းခွေသည်ကြီးလှ၏။ ဤသင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်လိုချင်သောအရွယ်အစားနှင့်အရောင်များကိုစက္ကူတစ်ရွက်ဖြင့်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကလေးသူငယ်များနှင့်လုပ်ရန်လည်းအလွန်ကောင်းပါသည်။
ဖခင်များနေ့အတွက် ၅ မိနစ်အတွင်းစူပါလွယ်ကူသောလက်ဆောင်ကဒ်
လက်ဆောင်များ ၀ ယ်ရန်အချိန်မရှိခဲ့ပါကဤခမည်းတော်၏နေ့ကဒ်ပြားကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ ၅ မိနစ်လောက်ကြာတယ်။
3 တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူ ORIGAMI ၏လွယ်ကူသောစိတ်ကူးများ, အထူးကလေးများ
ဒီသင်ခန်းစာမှာ origami figure ကိုဖန်တီးရန်လွယ်ကူသောအကြံဥာဏ် (၃) ခုကိုငါယူလာသည်။ ဒီနည်းလမ်းကိုကလေးများအားစတင်သင်ကြားရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော။ ရောင်စုံစက္ကူနှင့်အမှတ်အသားများလိုအပ်သည်။
origami နည်းစနစ်ကို သုံး၍ ငွေကိုမူလနည်းလမ်းဖြင့်ပေးပါ။
origami နည်းစနစ်ကို သုံး၍ ငွေကိုမူလနည်းလမ်းဖြင့်ပေးပါ။ ဒီနေ့မင်းမှာကွဲပြားခြားနားတဲ့မူရင်းနဲ့လွယ်ကူတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုငါပြချင်တယ်
အနီရောင်ကတ်ထူပြားနှင့်ခဲတံဖြူ သုံး၍ အနုတ်လက္ခဏာနည်းနည်း သုံး၍ ဇီးကွက်ဆွဲပုံ။ ဒီအဆင့်ခြောက်ဆင့်ကိုသင်လိုက်နာမယ်။
ကလေးများအတွက် Origami - စက္ကူခွေးဖြင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်
ဒီသင်ခန်းစာမှာကလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ origami နည်းစနစ်ကိုလေ့လာတော့မယ်၊ သူတို့ကလွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့စတင်နိူင်တယ်။
သင်အကြိုက်ဆုံးထားရန် Scrapbooking ကဒ်အယ်လ်ဘမ်
သင်၏အကြိုက်ဆုံးဓါတ်ပုံများကိုသိမ်းဆည်းရန်ဤစက္ကူဖြင့်ဖတ်ရမည့်အယ်လ်ဘမ် - ကဒ်ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ၊ ၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
CUPCAKE MOLDS ဖြင့်ခရစ်စမတ်အဆင်တန်ဆာများကိုဖန်တီးရန် IDE ၃
ဒီသင်ခန်းစာမှာမင်းရဲ့အတွေး (၃) ခုကိုမင်းယူဆောင်လာတဲ့မင်းရဲ့ခရစ်စမတ်အလှဆင်မှုအတွက်မက္ကဆီကိုကော့ကွန်းပုံသဏ္asာန်ကဲ့သို့စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ငါယူလာပေးတယ်။
စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်ကနွေ ဦး စာအုပ်တစ်အုပ်ဘယ်လိုရေးရမလဲ။ ဒီမှတ်စုစာအုပ်ကိုသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပြုလုပ်ပြီးသင်ကြိုက်သလိုလုပ်ပါ။
Valentine's Day အတွက်အထူးမိတ်ဆွေတစ် ဦး ကိုပေးဖို့ crepe စက္ကူနဲ့ပန်းတွေဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာပြသပါတယ်။
ရိုးရှင်းတဲ့ bookmark လုပ်နည်း
စာရွက်ပေါ်မှာရိုးရှင်းတဲ့ Bookmark လုပ်ဖို့ဘယ်လိုဖတ်ရမယ်၊ အဲဒါကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးဖတ်ဖို့လွယ်ကူအောင်လုပ်နိုင်တယ်။
ဤသင်ခန်းစာတွင်စိတ်ကူး (၄) ခုကိုပြသပါမည်။ သို့မှသာသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် bookmarks သို့မဟုတ် bookmarks များကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
DIY - စက္ကူကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ
DIY - စက္ကူကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ။ သင်၏ကတ်များကိုသိမ်းဆည်းခြင်း၊ လက်မှတ်များဝယ်ခြင်း၊ လက်မှတ်များဝယ်ခြင်းစက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပိုက်ဆံအိတ်ဖြစ်သည်။
washi တိပ်ဖြင့်လက်မှုပညာလုပ်ရန်အကြံဥာဏ်နှစ်မျိုး - Easy DIY
ဒီသင်ခန်းစာမှာ ၀ ါရှတိပ်တွေသုံးပြီးလက်မှုပညာလုပ်ဖို့အကြံဥာဏ် ၂ ခုယူလာပေးတယ်။ ၎င်းသည်အရောင်များသောပန်းချီကားများနှင့်ပုံစံများပါသည့်အလှဆင်ကော်ကပ်တိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပါတီများနှင့်ပွဲတော်များအတွက် crepe စက္ကူဖြင့်သကြားလုံးသေတ္တာများပြုလုပ်နည်း
ဒီသင်ခန်းစာမှာပါတီတွေ၊ မွေးနေ့တွေ၊ ကလေးရေပန်း၊ မိတ်သဟာယတွေအတွက်စုံလင်တဲ့သကြားလုံးသေတ္တာများ (သို့မဟုတ်) သကြားလုံးသေတ္တာများကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြမယ်။
ချစ်သူများနေ့အတွက်ပန်းပွင့်များ၏နှလုံးသား - အဆင့်တစ်ဆင့်
ဒီသင်ခန်းစာမှာ Valentine Day (သို့) Valentine Day မှာအလှဆင်ရန်သို့မဟုတ်လက်ဆောင်အဖြစ်ပန်းပွင့်နှလုံးကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးပါတယ်။ လွယ်ကူပြီးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့။
ဒီခရစ်စမတ်သည်သင်၏လက်ဆောင်သေတ္တာများအတွက်ဤတံဆိပ်များပြုလုပ်နည်းကိုလေ့လာပါ။ သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး အားအထူးလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခြင်းသည်မူလနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်မှတ်စုစာအုပ်များကြိုက်လျှင်သင်ဤသင်ခန်းစာကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ငါ၊ သင်ကိုယ်တိုင် DIY ကိုပြသမည် - မှတ်စုစာအုပ်ကိုသင်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေရန်မည်သို့စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရမည်။
Baby Shower အတွက်ကလေးဖိနပ်များ
သင်သည်ဤဟယ်လိုဝင်းကိုအထင်ကြီးလိုပါကဤဟယ်လိုဝင်းကဒ်များကိုထုတ်ပေးပြီးသင် guests ည့်သည်များကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်။ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သတိပြုပါ။
scrapbooking များအတွက် tags tags များ။ နှလုံး
သင်၏ scrapbooking စီမံကိန်းများအတွက်ဤတံဆိပ်များသို့မဟုတ်တံဆိပ်များကိုနှလုံးပုံသဏ္inာန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ သူတို့သည်သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုကြည့်ကောင်းမြင်ကြသည်။
သင်၏ guests ည့်သည်များကိုကျေနပ်မှုပေးသည်ထက်ဘာမျှ ပို၍ လှပသည်မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာပန်းပွင့်ပုံသေတ္တာ၏ဤသင်ခန်းစာသည်မွေးနေ့အမှတ်တရပစ္စည်းများအဖြစ်ယူဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မွေးနေ့အမှတ်တရလက်ဆောင်အိတ်များကိုစူပါအမြန်၊ လွယ်ကူပြီးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့နည်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါ။ ပြီးပြည့်စုံသောခြေလှမ်းကိုတစ်ဆင့်ချင်းကြည့်ပါ။
အစီအစဉ်များကို Washi Tape နှင့်မည်သို့အလှဆင်ရမည်နည်း
သင်၏အစီအစဉ်ကိုကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားပြုရန်သို့မဟုတ်စူပါမူရင်းလက်ဆောင်တစ်ခုပြုလုပ်လိုပါက Washi Tape ကိုအသုံးပြုပါ။ ဤနေရာတွင်အစီအစဉ်များကို Washi Tape နှင့်မည်သို့အလှဆင်ရမည်ကိုဖော်ပြပါမည်။
ဒီသစ်ပင်ပုံသဏ္bookာန် bookmark ကိုစက္ကူထဲကထုတ်ပါ။ သင်၏ scrapbooking ပစ္စည်းများနှင့်စက္ကူအပိုင်းအစများကိုပြန်သုံးရန်အလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူး။
scrapbook technique ကိုဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်လုပ်နည်း
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာဓာတ်ပုံများကိုလှပသော Scrapbook နည်းပညာဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တွင်တစ်ဆင့်ချင်းသင်ပြပါ။ လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ပေးဖို့ကောင်းတဲ့အသေးစိတ်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာပါတီပွဲတွေ၊ ပွဲနေ့တွေမှာ guests ည့်သည်တွေကိုပေးမယ့်သကြားလုံးဒါမှမဟုတ်ချောကလက်တွေသေတ္တာတွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါလိမ့်မယ်။ template ကိုအတူပါဝင်သည်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာသတင်းစာပုံပန်းကန်တွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ဈေးပေါပေါနဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။ သူတို့ကအလွန်ကောင်းသောရလဒ်ရှိသည်, သူတို့ခံနိုင်ရည်နှင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ဒီလက်မှုပညာမှာ Notebook တစ်လုံးကိုလွယ်လွယ်ကူကူဘယ်လိုအလှဆင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးအခြေခံပုံသဏ္changingာန်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းဖြင့်သူကပိုမိုစိတ်ကြိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Bookmark ပြုလုပ်နည်း၊ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်အကြံဥာဏ်တစ်ခု (သို့) သင်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ကိုအလှဆင်ရုံသာလုပ်ရန်သင်ယူပါ။ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မလွတ်ပါစေနှင့်။
Washi တိပ်ဖြင့်ကဒ်ပြားလုပ်ပုံကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင်ပြပါမည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသောလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခြင်းသည်အမြဲတမ်းကောင်းပါသည်၊ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မလွတ်ပါစေနှင့်။
ကလေးတွေအတွက်ဒီပျော်စရာစက္ကူနဂါးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါ။ သူတို့ကသေချာချစ်ပြီးအချိန်ကောင်းလည်းရှိတယ်။ သူတို့ကအရမ်းလွယ်တယ်။
မွေးနေ့အမှတ်တရလက်ဆောင်အိတ်များကိုဖိုများပါ ၀ င်ပြီးမူလမွေးနေ့အတွက်လွယ်ကူပြီးစျေးသိပ်မကြီးသည့်သင်ခန်းစာကိုမျှဝေပေးသည်။
စက္ကူကံဇာတာ cookies တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
လက်ဆောင်များအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်မွေးနေ့အမှတ်တရပစ္စည်းများအဖြစ်အသုံးပြုရန်ကျော်ကြားသောစက္ကူကံဇာတာ cookies များကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
သကြားလုံးပုံအမှတ်တရလက်ဆောင်များပြုလုပ်နည်း၊ မူရင်း၊ ကလေးများ၏မွေးနေ့များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Scrapbooking တံဆိပ်များသို့မဟုတ် tags များ
ဤတံဆိပ်များသို့မဟုတ်စာတိုပေစအမှတ်အသားများကိုလွယ်ကူစွာမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ သူတို့ကအံ့မခန်းဖြစ်ကြသည် !!!
Valentine's Day ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ
Valentine's Day မှာဘာတွေပေးရမယ်ဆိုတာသင်သိပြီးသားဆိုရင်ထုပ်ပိုးမှုကိုစဉ်းစားရန်၊ ထုပ်ပိုးရန်လွယ်ကူအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ချစ်သူများနေ့အတွက် Valentine Card
Valentine's Day ကဲ့သို့သောထူးခြားသောပွဲတစ်ပွဲအတွက်သင်ကမြန်ဆန်။ လှပသောကဒ်ကိုပြုလုပ်လိုပါကဤသည်ကိုမူလအဆိုပြုထားသည်။
ဒီနေ့ခေတ်လက်မှုပညာမှာ Bookmark (သို့) စာမျက်နှာအမှတ်အသားကိုဘယ်လိုစိတ်ကြိုက်လုပ်မလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ဂျပန်ချည်နှောင်ခြင်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကို DIY ဆောင်းပါး။
ဒီနွေရာသီနွေရာသီရာသီတွင်လုံးဝ DIY ပန်းပွင့်သရဖူနှင့်မည်သို့ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ရမည်ကိုပြသည့် DIY ဆောင်းပါး။
စက္ကူပန်းပွင့်နှင့်အတူ Hippie tiara
အပြည့်အ ၀ လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတွယ်ကပ်စက္ကူပန်းများနှင့်အတူ Hippie tiara သည်အားလပ်ရက်များအတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးအဆောင်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းများနှင့်ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်
နွေ ဦး ရာသီအတွက်စက္ကူ daisies
crepe စက္ကူနှင့်ခလုတ်နှင့်အတူစက္ကူ daisies ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအပေါ်သင်ခန်းစာ။ နွေ ဦး ရာသီသို့မဟုတ်နွေရာသီပါတီများကိုအလှဆင်ရန်သင်သူတို့ကိုသုံးနိုင်သည်။
ပါတီများအတွက်စံပြ DIY ပစ္စည်း။ ဒီသင်ခန်းစာမှာ crepe စက္ကူပါတဲ့ပန်းကုံးကိုအလွယ်တကူမြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါမယ်။ နောက်ဆုံးမိနစ်ပါတီများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော။
Decoupage, ဒီ technique ကိုအတူမှတ်စုစာအုပ်အလှဆင်ဖို့ဘယ်လို
Decoupage, စွယ်စုံသုံးရလွယ်ကူသောနည်းစနစ်။ ပရိဘောဂများ၊ ပန်းအိုးများ၊ အိုးများ၊ ဖယောင်းတိုင်များနှင့်ဤနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အလှဆင်လိုသောဒြပ်စင်အားလုံး။
Scrapbooking, ဖက်ရှင် technique ကို။ ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာမှာ Scrapbooking နည်းစနစ်နဲ့လှပတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ကဒ်ကိုပြပေးပါမယ်။ အရမ်းလွယ်ကူပြီးတော်တော်လေး။
ဒီသင်ခန်းစာယူထားတဲ့လက်မှုပညာမှာမိုဘိုင်းဖုန်းအဖုံးကိုဖုံးအုပ်ပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပုံကို ၀ တ်ဆင်တိပ်ဖြင့်ရက်လုပ်နည်းလေ့လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီအနုပညာဟာငါတို့ပွဲတော်အတွက်သုံးနိုင်တဲ့လှပတဲ့လှည့်ကွက်တွေကိုကြိုးစားဖို့ရည်မှန်းထားတယ်၊ crepe စက္ကူနှင့်အတူမီးမောင်းထိုးပြပုံ
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုအိမ်သို့ဖိတ်ကြားသောအခါထိုအခါသမယများအတွက်အဆင်ပြေဆုံးသော 3D ကဒ်တစ်လုံးကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုသင်ပြပါမည်။
အလှဆင်ဖို့ Crepe ပန်းပွင့်
အလှဆင်ရန် crepe သို့မဟုတ် crepe စက္ကူဖြင့်ပန်းများပြုလုပ်နည်းကို DIY ပြုလုပ်ပါ။
ပါတီကျားကန်ဖို့ DIY ကို item ။ အိမ်မှာရှိသည့်ပစ္စည်းများကို သုံး၍ ပါတီပွဲတစ်ခုတွင်ရှင်သန်ရန်ပျော်စရာကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုနည်းလမ်း။
စက္ကူပါတီအလှဆင်အပေါ် DIY ဆောင်းပါး။ ဤဆောင်းပါး၌လှပသောစက္ကူပန်းပွင့်လုပ်ရန်စိတ်ကူးတစ်ခုသင်တွေ့လိမ့်မည်
စက္ကူစာရွက်များနှင့်အတူ Mini ကိုစာအုပ်
ဤဆောင်းပါး၌စာရွက်ငယ်များအားသော့ချိတ်သို့မဟုတ်အသေးအဖွဲများအဖြစ်စုဆောင်းထားသည့်စာအုပ်ငယ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးပါသည်။ သူ့ကိုယ်ပိုင်တစ် ဦး ကအလွန်ထူးခြားတဲ့ဝါသနာ။
တခါတရံကလေးငယ်များကိုကျွေးရန်ခက်ခဲသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်စားနေစဉ်ပျော်စရာရှိစေရန်ဤဇွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။ ရိုးရှင်းသောပျော်စရာနည်းလမ်း။
ပူဖောင်းနှင့်သတင်းစာပါရှိသည့် Frankenstein နဂါး
ဤဆောင်းပါး၌အိမ်သုံးစက္ကူ၊ ကော်နှင့်ရေတို့ဖြင့်စီတန်းထားသည့်ပူဖောင်း၏နည်းစနစ်ဖြင့်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲအတွက် Frankenstein ခေါင်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးသည်။
FIMO မှလက်သည်းအပိုပစ္စည်းများဖြင့်မှတ်စုစာအုပ်ကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန် DIY စိတ်ကူး။
မဂ္ဂဇင်း၊ ခဲတံ၊ ကော်နှင့်အဝတ်တိပ်ပါသောဟယ်လိုဝင်းပွဲအတွက်ဖရုံသီးပြုလုပ်နည်းအတွက်သင်ခန်းစာ။
ဟယ်လိုများအတွက် Bat ပန်းကုံး
DIY - ကော်ဖီစစ်ထားတဲ့အိန္ဒိယအိမ်
DIY - ပြန်လည်အသုံးပြုပစ္စည်းများနှင့်မျှတသောပန်ကာ
ဒီဆောင်းပါးမှာ Fair ကိုဘယ်လိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစေမလဲဆိုတာကိုပြပေးပါမယ်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်မည်သည့်အပူသို့မဟုတ် agovios မျိုးကိုမသုံးစွဲပါ၊ သင့်ကိုယ်သင်သဘာဝအတိုင်းလန်းဆန်းစေသည်။
DIY: တစ်သျှူးစက္ကူနှင့်အတူမျှတသော Shawl
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကိုအလှဆင်ဖို့ Origami ပန်းပွင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ထောင့်များကိုမူရင်း၊ လှပသောနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုဖြင့်ငါတို့အိမ်ထောင့်များကိုအလှဆင်ရန်ရိုးရှင်းသော origami ပန်းများပြုလုပ်နည်း။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်စက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Fair အတွက်အလှအပအတွက်ပန်းချီဆရာတစ် ဦး နှင့်မတူသောသူများအတွက်မည်သို့လှပသောပန်းများပြုလုပ်နိုင်ပုံကိုသင်ပြပါမည်။
DIY: ပျော်စရာစက္ကူ Bookmarks
စက္ကူ၊ ကော်နှင့်အမှတ်အသားများဖြင့်ပျော်စရာ bookmark များကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကို diy ။
DIY: Origami ကရိန်းတွေနဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းလုပ်နည်း
ငါတို့အိမ်၏မည်သည့်ထောင့်ကိုမဆိုအလှဆင်နိုင်ရန်စက္ကူရိန်းများဖြင့်မိုဘိုင်းပြုလုပ်နည်းကို DIY ပြုလုပ်ပါ။
တစ် ဦး Origami ရိန်းအောင်ဘယ်လို
origami crane ပြုလုပ်ရန်အဆင့်ဆင့်ရှင်းလင်းချက်များနှင့် DIY ။
DIY: စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါနှင့် Valentine ပန်း
အထူးသဖြင့် Valentine's Day အတွက်စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါနှင့်လှပသောပန်းများကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။ တစ် ဦး ကအလွန်ပိုင်ထိုက်သောနှင့်လှပသောအသေးစိတ်။
ဤဆောင်းပါး၌သင်၏လက်တွဲဖော်သို့မဟုတ်သင်နှစ် ဦး စလုံး၏ဓာတ်ပုံကိုမည်သို့ဆွဲဆောင်နိုင်မည်နည်း။ လှပသောပန်းချီကားတစ်ချပ်မည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုသင်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မူရင်းနှင့်လှပသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည် muffin စက္ကူမှိုဖြင့်အလှဆင်ထားသောသို့မဟုတ်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောမျက်နှာကျက်မီးလုံးကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်ပြပါမည်။
Decoupage ဖြင့်အလှဆင်ရန်သင်ယူပါ။ ဤနည်းလမ်းကိုမည်သို့စတင်ရမည်နည်း
လက်ဆောင်တစ်ခုအတွက် Parisian အလှဆင်